बिहे अघि सेक्स गरेको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति ८ जेष्ठ २०७६, बुधबार १२:१७ लेखक nepali janta
त्यस्तै पुरुषको लिंगको छाला यौनसम्पर्क पछिमात्रै फाट्छ वा खुल्छ भन्ने कुरा पनि सत्य होइन । त्यसकारण विवाहअगाडि यौनसम्पर्क राखे-नराखेको हुरा स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा सेक्स गर्ने व्यक्तिबाहेक अरूले पछि थाहा पाउन सक्दैन ।
यसका लागि एउटा उदाहरण दिँदा कुरा बुझ्न अझ सजिलो होला । ठूलो गाँस खाना खाएर मुख वा खाएको कुरा पेटसम्म लैजाने खाद्यनली खुकुलो वा ठूलो हुन्छन् र ? हुँदैनन् नि । त्यसैले यौनसम्पर्कपछि योनी खुकुलो हुँदैन ।
काठमाडौं । सरकारले प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक तहका शिक्षक व्यवस्थापनको नयाँ ढाँचा निर्माण गर्ने भएको छ । शिक्षा…
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको तयारीको सुरुआत गरेको छ । त्रिविले फागुनमा गर्ने भनेर…
मनमोहनले १२ वर्षमा पनि न्याय पाएनन्
भारतीय नागरिक मनमोहन पाण्डे झण्डै १२ वर्षदेखि प्रहरी प्रशासन र भारतीय दूतावासमा न्यायका लागि धाइरहेका छन् । तर, उनीमाथिको…
सर्लाही । सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका १२ कालिञ्जोरमा सर्पले डसेर एक बालिकाको मृत्यु भएको छ । विषालु सर्पले डसेर स्थानीय…